“Saddex Habeen Ma Seexan Doono” – Halyeygii Red Star Belgrade Ee Goolasha Ku Niyad-jabiyey Liverpool – Cadalool.com
“Saddex Habeen Ma Seexan Doono” – Halyeygii Red Star Belgrade Ee Goolasha Ku Niyad-jabiyey Liverpool
Weeraryahanka kooxda Red Star Belgrade ee Milan Pavkov oo xalay laba gool ka dhaliyey Liverpool ayaa waxa uu sheegay in aanu hurdo seexan doonin labada ama saddexda habeen ee soo socda farxad darteed, kaddib markii uu laba gool guusha ku siiyey kooxdiisa ciyaartii xalay ay 2-0 kaga adkaadeen Liverpool.
Pavkov ayaa laba gool oo daqiiqado kooban u dhexeeyeen ka dhaliyey Liverpool, waxaanay Red Star Belgrade heshay guusheedii ugu horreysay ee tartanka Champions League ee xili ciyaareedkan, hase yeeshee way adag tahay inay rumayso riyadeeda ah inay usoo baxdo wareegga labaad oo ay ugu dambaysay sannadkii 1992-kii.
Milan Pavkov oo ahaa halyey ay difaaca Liverpool u maare waayeen ayaa goolka hore ku dhaliyey madax, laakiin daqiiqado kadib ayaa uu kubbad uu kasoo qaatay khadka dhexe waxa uu laag awood badan ku tijaabiyey goolhaye Becker oo kasoo baxsanaa goolkiisa, waxaana uu ku ruxay shabaqa, halkaasna waxa uu kooxdiisa ku siiyey guushii icyaarta.
Hadda, Pavkov oo u warramay shabakadda UEFA.com ayaa waxa uu sheegay inuu ka dhabeeyey ballantiisii ahayd in uu goolal ka dhaliyo Liverpool, farxad darteedna aanu seexan doonin habeennada soo socda.
“Waan rajaynayey guushan. Sidii aan hore u sheegay, waan jecelahay inaan gool ka dhaliyo Liverpool, waanan rumeeyey. Xattaa waxa aan ak dhaliyey Laba.
“Hurdo? marka laga yimaaddo ciyaartan, ma seexan karo kulamada horyaalka qaaarkood kaddib. Waxa laga yaabaa in labada ama saddexda habeen ee soo socda aanan seexanin. Laakiin subaxnimada ayaan seexan doonaa sababtoo ah ciyaar muhiim ah ayaanu toddobaadkan leenahay.” Sidaas ayuu yidhi Milan Pavkov.
Red Star ayaa waxay yeelatay afar dhibcood iyadoo ku jirta Group-ka dhimashada ee C, waxaanay laba dhibcood ka hooseeyaan Napoli iyo Liverpool oo hoggaanka wada haya, waxaase ay kusoo dhow yihiin PSG oo haysata shan.
Dhinaca kale, difaaca Red Star Belgrade ee Milos Degenek ayaa sheegay in Liverpool ay dhayalsatay, waxaanu yidhi: “Si fiican ayaanu u xidhnay. Pavkov laba gool oo qurux badan ayuu dhaliyey, laakiin ciyaartoyga oo dhan si fiican ayay u ciyaareen. Waxay ila tahay in Liverpool na dhayalsatay, taasina ku ahayd khalad.”
Molos Degenek waxa uu hanjabaad u diray kooxda Napoli, waxaanu yidhi: “Waxa aan rumaysanahay inaanu garaaci doono Napoli”
Si kastaba ha ahaatee, Red Star Belgrade ayaa labda ciyaarood ee u hadhay waxay la yeelan doontaa Napoli iyo PSG.